INJA YEGOPRO IBAMBA USUKU LOMTSHATO KWIKHAMERA: IVIDIYO YEVIRAL - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Inja yeGoPro ibamba uSuku loMtshato kwiKhamera, iVidiyo iya kwiNtsholongwane
Inja yeGoPro ibamba uSuku loMtshato kwiKhamera, iVidiyo iya kwiNtsholongwane
U-Addie kunye noMarshall Burnette babenenja yabo, uRyder, benza ifilimu yomtshato wabo nge-GoPro ngaphezulu kweNtaba yeRoan enekhephu. Ityala: iYouTube
Ngu: Kelly Spears 11/29/2015 ngo-10: 19 AM
Kunqabile kakhulu ukuba umntu osemva kwekhamera yinkwenkwezi yomboniso, kodwa kwisibini saseTennessee ngomhla wabo womtshato, yayinjalo imeko.
U-Addie noMarshall Burnett babetshatele kumsitho wasenyongweni, ongaphandle, okhumbuza indawo emangazayo yasebusika, nge-2 kaNovemba ngo-2014. akukho nto imangalisayo.
URyder uthathe amaxesha amaninzi akhethekileyo, ukusuka kuAddie elungiselela ukuba ngumtshakazi, kwimibhiyozo yasemva komsitho. Iindlebe zikaHusky ziphambili kwaye ziphakathi kwividiyo, ukongeza kumtsalane wosuku lomtshato.
Kwiintsuku nje ezimbini emva kwesikhumbuzo sonyaka omnye, u-Addie noMarshall bathumele ividiyo kwiYouTube, esele ijongiwe phantse izihlandlo ezi-4.
imibuzo yokubuza indawo yomtshato
Nge-2 kaNovemba ngo-2014, mna no-Addie satshata encotsheni yeRoan Mountain, TN, kwii-2 iinyawo zekhephu, ufunda inkcazo kaMarshall yevidiyo. Kwakubanda kwaye kunomlingo. Inja yethu, uRyder, yanyanzelisa ukufota ividiyo yomtshato, ke siyamvumela ukuba enze into yakhe. Uthathe ithutyana ukuhlela ividiyo, kodwa sicinga ukuba wenze umsebenzi omkhulu.
Kudliwanondlebe olwenziweyo I-Fox kunye nabahlobo veki , U-Addie uyachaza, Uthando esinalo [kuRyder] lufana nqwa nothando onokuba nalo ngomntwana wakho, ke ukuba nenxalenye yomtshato wethu kwanikezelwa.
Nangona uMarshall evuma ukuba esi sibini besingalindelanga ukuba iza kwenzeka njani ividiyo, abo batshatayo bayazithanda iziphumo.
Kwaye ayisiyiyo yodwa. U-Addie uxelele uFox kunye nabahlobo ukuba le vidiyo ifumene uluhlu olubanzi lwezimvo, izisa uvuyo kwabanye kwaye ibenza abanye babe neemvakalelo.
Kuye kwachukumisa ngokwenene ukubona izimvo zabantu kwividiyo, utshilo u-Addie. Uninzi lwabantu luye lwaba neemvakalelo kwaye lathi luye lwazinyembezi. Ke kuyaphola ngenene ebhodini ukubona umbono wabantu abahlukeneyo kwaye uthathe ividiyo.
Ngelixa u-Addie evuma ukuba usuku lwabo lomtshato yayilixesha lokuqala ababeka iGoPro kwiRyder, uthi inja ibisoloko ikwezinye iindibano. Lo mntwana unokuba nekamva kwifilimu!
mdala kangakanani ixilongo mfazi
Isikhumbuzo sosuku oluhle kule ntsapho intle! Ryder, wenze umsebenzi olungileyo!
isikwere sethayile esingasemva
Iinwele zomtshato isiqingatha sinyuka ngesiqingatha kunye ne-curls kunye ne-braid
Iingoma zomdaniso katata-ntombi 2020
iiplani zendlu zekhonkrithi zale mihla
iintlobo zeemilo zomqamelo
Umama wesuti yokunxiba